true conditions /zu-ZA/tools-for-life/conditions/steps/survival-and-ethics.html read 8 21 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/conditions_zu_ZA.jpg Ukuziphatha neZimo
Lapho kunobungozi endaweni, kuvame ukuphathwa ngumuntu ophakeme (ophakeme esikhundleni enkampanini noma ku-organization) hhayi umuntu odale ingozi. Ngakho-ke, kunamaFomula amabili Engozi afakiwe lapha, elilodwa elenzelwe abaphezulu endaweni kanye nelomuntu othintekayo.
Ifomula yokuqala efakiwe lapha ingeyabadala ukuba bayisebenzise (njengombhaki omkhulu endaweni yokudlela ethola umbhaki osemncane eqhubeka nokonakalisa amakhekhe ngokusebenzisa izithako ezingafanele).
Dlula (unganaki abancane noma abancane abaphethe umsebenzi bese uwusingatha wena uqobo).
Phatha isimo nanoma iyiphi ingozi ekuso.
Ngesimo kushiwo indlela okunzima ngayo izinto ngaleso sikhathi, izimo eziyingozi obhekene nazo.
Isibonelo, endabeni yombhaki omkhulu, wayezenzela amakhekhe uqobo ngakho kunamakhekhe okufanele athengiswe.
Tshela abancane noma omncane ukuthi basesimweni Sengozi.
Thola umuntu ngamunye oxhumene Nesimo Sengozi ukuba alandele Isimo Sengozi Yakhe bese uqinisekisa ukuthi ulandela ifomula ngokuphelele.
Hlela umsebenzi kabusha ukuze isimo singaphindi.
Ncoma noma iyiphi inqubomgomo eqinile (imithetho noma imihlahlandlela) ezothola futhi/noma ivimbele lesi simo ukuthi siphinde senzeke.
Isimo Sengozi sivame ukunikezwa omncane noma abancane lapho:
Isimo Esiphuthumayo siqhubeke isikhathi eside kakhulu.
Isibalo sokubonisa isimo sehlela phansi ngokujula kakhulu.
Isikhulu esiphezulu ngokuzumayo sizithola sesifanele uqobo ukwenza umsebenzi wabasebenzi abancane abaphethe lo msebenzi ngoba lomsebenzi usenkingeni.
Ifomula Yesimo Sengozi Somuntu Uqobo
Umuntu usebenzisa iFomula Yobungozi Ngokwakhe Uqobo lapho:
Usebenzise iFomula Yokungabi khona wakhuphukela eSimweni Sengozi.
Usesimweni lapho kunengozi khona noma engalimala noma elahlekelwe yena noma isikhundla sakhe, noma indawo ethile yempilo yakhe.
Isibalo sokubonisa isimo sakhe siqu kugrafu yakhe siphansi (okungaphezulu kokuncane).
Nayi ifomula Yesimo Sengozi Somuntu siqu Oyedwa.
Imikhuba yokudlula eceleni (izindlela ezijwayelekile zokuziphatha) noma izindlela ezijwayelekile.
Ngokuthi ukudlula eceleni kuhloselwe lapha ukugwema ukwenza okuthile noma ukwenza okuthile ngokusebenzisa enye indlela.
Zitshele ukuthi useSimweni Esiyingozi.
Ngena kwezakho izimiso zokuziphatha ngokuthola ukuthi wenzani okungekhona okokuziphatha futhi usebenzise ukulawula komuntu ukuzilungisa futhi uthembeke futhi uqonde.
Hlela impilo yakho kabusha ukuze isimo esiyingozi singaqhubeki ukwenzeka kuwe.
Sebenza ngokuningiliziwe bese uqala ukusebenzisa inqubomgomo eqinile (imithetho noma izinkombandlela), okuthi ngokuzayo, kutholakale futhi kuvimbeke isimo esifanayo ukuthi singenzeki.
Isibonelo Sesimo Sobungozi Somuntu Siqu
Ake sithi indoda ibiyamukela imali kumalume wayo ethi uthenga nayo indlu. Futhi wayengekho. Wayeyichitha entombazaneni. Manje uSengozini eqhubekayo. Umalume wakhe angathola nganoma yisiphi isikhathi futhi lowo muntu ulindele ukuthola ifa lika malume wakhe ngelinye ilanga. Ngakho ukhathazeke kakhulu. Noma engacabangi ngakho, ukukhathazeka kusekhona.
Kuzodingeka alahle imikhuba nezinto ezijwayelekile zokusebenzisa imali ezintweni ezingeyona indlu. Ngamanye amagama kuzofanela ayeke ukwamukela leyo mali.
Kepha kuzofanele futhi asisingathe lesi simo nanoma ibuphi ubungozi obukhona kuso. Manje kungaba yingozi ukubhala, “Malume othandekayo u-George, unyaka odlule nohhafu yonke imali obukade ungithumelela yona yokuthenga indlu, bengiyisebenzisa kwintombi yami.”
Kuzofanele abheke ukuthi angakuphatha kanjani lokho ukuze kungabikho bungozi kukho. Futhi kungathatha ukucabanga okuningi. Uma evele wagxuma wathi kumalume wakhe, “Ngiqambe amanga kuwe, Malume George. Bengichitha yonke imali yakho,” kungenzeka ukuthi kungahle kumthuse kabi uMalume uGeorge ukuthi aze amkhiphe encwadini yakhe yefa, njalonjalo. Lapho-ke uzobe Esengozini ngempela.
Ngakho-ke kuzofanela athole ukuthi kufanele akusingathe kanjani. Futhi kungahle kube lula njengokubhala, “Malume othandekayo u-George, bengilokhu ngithola usizo nge-Scientology muva nje futhi lwenza indoda eqotho kimi. Futhi kunezinto eziningi ezingathembeki engizenzile empilweni yami futhi enye yazo yile. Manje uzongidubula ngokwenza lokhu, kepha empeleni ngisebenzisa le mali futhi ngisebenzisa enye yayo ukuze ngiphile. Kodwa-ke, akulungile kuwe.”
Isinyathelo esilandelayo ukuthi, “Zitshele ukuthi Usesimweni Esiyingozi.” Lokho kulapho kuphela ngoba abantu bakhohlwa ukukwenza.
Futhi-ke “Ngena kwezakho izimiso zokuziphatha ngokuthola ukuthi wenzani okungekhona okokuziphatha futhi usebenzise ukulawula komuntu ukuzilungisa futhi uthembeke futhi uqonde.”
Manje kungenzeka kube khona omunye uMalume uGeorges futhi kusamele aphathe intombi yakhe. Noma kungenzeka ukuthi ubephethe umalume wakhe, kungahle kube nabanye abantu okufanele babaphathe.
Isinyathelo esilandelayo ukuthi, “Hlela impilo yakho kabusha ukuze isimo esiyingozi singaqhubeki ukwenzeka kuwe.” futhi kulesi sibonelo esenziwe nguMalume uGeorge, wayevele ayikhiphe (ayeke) aze asebenzise yonke imali yakhe entombini yakhe futhi kunokuthi alale ubusuku bonke, njalo ebusuku, alale kancane enze umsebenzi futhi ube yigugu. Lokho i-reorganization yayo.
Bese-ke, “Sebenza ngokuningiliziwe bese uqala ukusebenzisa inqubomgomo eqinile (imithetho noma izinkombandlela), okuthi ngokuzayo, ithole futhi ivimbele isimo esifanayo ukuthi singenzeki.” Ngamanye amagama unquma ukuthi, “Ngeke ngikhulume amanga ukuze ngithole imali,” noma okuthile okunjalo. Bekungaba yikho konke umuntu obekufanele anqume.
Kufana nesinqumo soNyaka oMusha (isinqumo umuntu asenzayo ekuqaleni konyaka omusha ukwenza okuthile noma ukuyeka ukwenza okuthile). Abantu abavame ukugcina izinqumo zabo zoNyaka oMusha ngoba abazitholanga ezinyathelweni zokuqala ezinhlanu. Empeleni ucela umuntu okulesi sikhathi ukuthi ashintshe futhi athuthukise izindlela zakhe.